Hiran State - News: HS:- Maamulka cusub ee Hiiraan oo siweyn loo.
HS:- Maamulka cusub ee Hiiraan oo siweyn loo.
HS:- Kadib xoreyntii kooxda Shabaab laga xoreeyey caasimada Hiiraan ee Belet Weyne iyo nawaaxigeeda waxaa durba magaalada Belet weyne safar ku tagay wafti ka socday dowlada oo doonayey inuu soo qiimeeyo xaalada gobolka iyo sida ugu macquulsan ee maamul lagu heli karo.
Waftigii dowlada oo laba jeer oo kala duwan safar ku tagay magaalada ayaa waxaa kii ugu horeyey hogaminayey r/wasaare Gaas iyo wasiiro ka tirsan xukumadiisa oo ay wehliyaan wasiiro Hiiraan ka soo jeedo oo uu ka mid yahay wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga.
Waftigii r/wasaaraha oo safarkoodu maalin ahaa markii ay Mogdishu tageen waxey ku dhawaaqeen in uusan Hiiraan ka jirin wax mamul ah sidaasina Hiiraan ku aadaan wafti uu hogaaminayey wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga Dr Cabdullaahi Godax Bare iyagoona ku biiray kulamo ay gudaha magaalada ka wadeen xildhibano iskugu jiray kuwo Mogdishu ka yimid iyo kuwo horey ciidamada Hiiraan ula joogay dhulka buuraleyda ah mudo sanad ku dhaw.
Mudo kadib waxaa leysla gartay in Hiiraan loo sameeyo maamul ay raali ka yahiin reer Hiiraan si meesha looga saaro maamulo is bar bar yaacayey oo magacyo kala duwan watay kuwaasi oo iskugu jiray kuwo qurbo joog ah iyo kuwo gudaha ka dagaalamayey.
Waftii uu hogaminayey wasiirka qorsheynta ayaa dhawr maalmood markii ay Hiiraan ku sugnaayeen kadib soo bandhigay shax ka turjumeysa maamulka Hiiraan uu yeelan doono taasi oo aad loo soo dhaweyey waxaana leysla gartay in Mogdishu lagu soo dhameeyo waxii dhiman si Hiiraan loogu helo maamul ay wada shaqeyni ka dhaxeyso TFGda.
Nasiib wanaag loolan adag oo dhax maray wasiirka qorsheynta iyo mamulka Doxada Shabelle oo ka dagaalamayey Hiiraan qeyb libaax ahne ka qaatay xoreynta Hiiraan inta laga xoreyey hada Shabaab ayaa ugu danbeyn waxaa maamulkii cusbaa loo magacaabay madaxii DOxada oo ka tanaasulay sheegashadii magacaas iyo maamulkaas oo inta badan qacabad ku aheyd bulshada Hiiraan.
Markii lagu dhawaaqay maamulka cusub waxaa siyaabo kala duwan u soo dhaweyey bulshada Hiiraan intii ay ka goneyd in Hiiraan loo helo hal maamul marka laga reebo wasiirka qorsheynta oo isagu doonayey inuu Hiiraan ka hirgaliyo mamul uu dadka ka mid noqonayo amaba hogaanka qabanayo ay noqdaan kuwo uu gacantiisa ku soo xushay isagoo ragii soo halgamay oo howsha bilaaw iyo dhamaad ku soo jiray iska indho tiray dibadana ka doonay shaqasi ay saaxiibo yahiin oo reer Hiiraan hogamiya.
Laakinse marka arinta dhinaca wanaagsan laga eego waxaa jiray xildhibano ciidanka la joogay buuraha oo dagaalka kula jiray oo iyagu aan marnaba wadan wax ajende ah oo ay iyagu wateen ujeedadooduna aheyd oo kaliya in Hiiraan loo helo maamul kumeel gaar ah cidii doonta ha hogaamisee waxeyna siweyn u soo dhaweeyeen maamulka cusub ee loo magacabaay gduoomiyahii ugu dada yaraa ebed ee reer Hiiraan hogamiya Cabdifataah Hasan Afrax oo ahaa madaxii Dooxada Shabelle.
Bulshada Hiiraan oo aanu siyaabo kala duwan ula xariirnay ayaa inoo xaqiijiyey iney mamulka cusub la shaqeynayaan maadama ay meesha ka baxday waxii looga soo horjeeday shaley oo aheyd magacii Dooxada Shabelle oo ay ka tanaasuleen. sidoo kale waxaa magaalada Mogdishu lagu wadaa in uu ka dhaco maalmaha inagu soo aadan xaflad weyn oo lagu sagootinayo maamulka cusub walow uu maamulka inuu la shaqeyo wali ka caga jiidayo wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah iyo qaar ka mid ah masuuliyiinta TFGda ugu jirta reer Hiiraan oo iyagu midkasta doonayeen inuu maamulka ka mid noqdo shaqsiyaad ay iyagu doonayeen amaba soo xusheen.
Masuuliyiintaan oo markii ay Hiiraan safarka ku tageen waxgaradka iyo bulshada Hiiraan siweyn u soo dhaweyeen fikirkooda maadaama loo heystay iney wadeen dan guud inkasta oo ay hada isa soo tareyso iney u cararayeen oo kaliya dantooda gaarka ah iyo sidii ay Hiiraan ugu hirgalin lahaayeen maamul ay hor boodayaan shaqsiyaad ay gacantooda kusoo xusheen.
Wararkii ugu danbeyey ee naga soo gaarayo Hiiraan ayaa shegayo in ay bulshada Hiiraan isku diyaarinayaan sidii ay u soo dhaweyn lahayeen masuuliyiinta maamulka cusub oo Hiiraan ku soo fool leh maalmaha inagu soo aadan, walow masuuliyiinta aanu kor ku soo sheeganay wali ay ka caga jiidayaan iney la shaqeeyaan mamulka cusub arintaan oo aanu warbixin rasmi ah ka soo diraayin doono maalmaha soo socda laga bilaabo r/wasaare Gaas ilaa qaar ka mid ah masuuliyiinta TFGda ugu jirta reer Hiiraan TFGda oo ugu horeeyo wasiirka qorsheynta.
Dhinaca kale marka xaalada nabadgalyo ee gobolka Hiiraan la eego siiba magaalada Belet Weyne iyo nawaaxigeeda oo ay gacanta ku hayaan ciidamo xoogan oo mamaulka Hiiraan ka tirsan iyo kuwa Ethiopia oo intooda badan magaalada dibada ka jooga hadane Shabaabka Hiiraan ku sugan waxey diyaar u yahiin iney qaataan nabad hadii la helo cid damaanad qaata nabadgalyadooda sida laga soo xigtay horjoogeyaasha Shabaab kuwooda ka soo jeeda Hiiraan oo iyagu Hiiraan kaka sugan goobo cayiman oo laga warhayo inta laga helayo maamul nabadgalyadooda damaanad qaada oo hubka kala wareego maadama ay Hiiraan ka geysteen tactiyo fara badan.
Inkasta oo howlaha horyaala maamulka cusub gobolka Hiiraan aysan yareyn hadane waxaa laguwadaa hadii waqti la siiyo iney wax badan ku qaban karaan mudada kumeel gaarka ah ee ay jiraan.
· admin on March 22 2012 11:51:39 · 0 Comments · 4180 Reads ·
14,606,187 unique visits